trano. Fiaraha-miasa teo amin’ny polisy sy ny mponina any an-toerana no nahazoana ity lehilahy
nitondra basy vita gasy ity. Rehefa azo avokoa ny loharanom-baovao mahakasika ilay lehilahy dia nisy ny sakana nataon’ny polisim-pirenena teny amin’ny tetezan’i Sambirano ka nosavaina avokoa ireo
fiara izay mandalo. Fisavana fiara mpitatitra iray no nahitana ity tovolahy ity ary dia nosavaina ny entany. Tra-tehaka tamin’izany ny basy vita gasy sy kara-panondro hosoka roa ary fitaovana iray famahana fanalahidy. Nentina avy hatrany teny amin’ny paositry ny polisy moa ity farany ary rehefa natao ny famotorana dia saika hamaky trano tao fokontany Androhibe izy no izao tra-tehaky ny polisy. Mirongatra ny vaky trano tanterahin’ireo jiolahy mitam-piadiana amin’iny faritra Ambanja iny, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny fialan-tsasatra izao.